Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ọmarịcha agwaetiti La Digue
Agwaetiti La digue
Dị ka mmemme mbubata, nke a makwaara dị ka Lafet La Digue nye ndị obodo, na -abịaru nso, anyị na -amaba n'ime oke mma nke agwaetiti ahụ.
Ememme Mbido, nke ndị obodo maara Lafet La Digue, bụ nnukwu mmemme na -adọta anya niile na La Digue.
Ememe a na-eme ọtụtụ ụbọchị na isi ihe omume na August 15, gụnyere oke ikuku na "La Grotto" nke Bishọp Seychelles na-aga.
A na -eso oke ahụ site na usoro ọdịnala site n'okporo ụzọ La Digue ruo Ụka St. Mary.
Ememe a na -aga n'ihu site na mmemme omenala, nnọkọ oriri na ọ streetụ streetụ na ihe nkiri egwu dị ndụ, ebe ndị na -egwu egwu na -egwu egwu n'ime mgbede. Ememe a agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na ụlọ nri anaghị enye ndị ọbịa ya nri dị iche iche, ọkachasị nri ọdịnala. Lafet La Digue bụ ihe atụ dị egwu nke ụdị ndụ ndị Seychelles.
Nke kacha nta n'ime agwaetiti atọ kacha mkpa na agwaetiti Seychelles, Agwaetiti La Digue bụ ama maka ezigbo ọmarịcha ya, na -ejide obi ndị njem si ebe niile. Site na ikuku ikuku ya, obere agwaetiti a na-atụgharị elekere ka ọ bụrụ ndụ ime obodo dị mfe ebe egwu ịnyịnya na akara ụkwụ bụ akara ama ama nke ọnụnọ mmadụ.
Njem ụgbọ mmiri were naanị nkeji iri abụọ site n'agwaetiti Praslin, na-enweghị ọdụ ụgbọ elu, La Digue bụ ebe ụfọdụ n'ụsọ mmiri ndị Seychelles na-adịghị emebi emebi dịka ama ama Anse Source D'Argent, otu n'ime osimiri kacha ese foto n'ụwa. Dọrọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị a nwere nnukwu okwute granite, nke enwere ike ịhụ naanị n'agwaetiti a nke Oke Osimiri India.
Obere agwaetiti a tụgharịrị aka oge, na -enye gị mmetụta nke ụdị ndụ Seychelles tupu mmụba nke oge, ihe mmadụ na -ahụkarị na agwaetiti abụọ ndị ọzọ. Were igwe kwụ otu ebe gị n'ụsọ osimiri gaa na L'Union Estate Park wee chọpụta igwe nnomi ọdịnala, ebe a na -emepụta mmanụ aki oyibo, na -agagharị n'ime osisi vaịn nke ubi vanilla. Ala na ụlọ bụkwa ebe obibi nke ụdị ihe ọkụkụ ọdịnala nke French-colonial na ebe a na-eli ozu maka ndị ọbịa mbụ na-arụ ọrụ ugbo.
Na mgbada, na njedebe nke L'Union Estate, ị ga -ahụ onwe gị ka ị na -aga n'ikpere mmiri dị ọcha nke Anse Source D'Argent nke mmiri turquoise gbara gburugburu na okwute na -enwu enwu. Osisi nkwụ na ahịhịa ahịhịa na gburugburu ya na -eme ka ịma mma nke ebe a mara mma, nke ama ama n'etiti ndị njem na ndị obodo. Ị nwedịrị ike ịwụli elu site na ile de Cocos na-atọ ụtọ ma na-egwu mmiri n'okpuru mmiri doro anya dị nso na ihe ịtụnanya mmiri mmiri Seychelles.
Ụzọ okike nke emerald green ga -eme ka ị bịaruo okike nso karịa mgbe ọ bụla ọzọ tupu i jiri ụdị ndụ ihe dị ndụ dọbata gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, ị nwere ike hụ ebe ofufe na -adịghị ahụkebe dị n'etiti takamaka na osisi bodamier dị nsọ nke La Digue Veuve Reserve.
Na ụdị agwaetiti n'ezie, jiri ụkwụ gị rie nri n'ájá n'otu n'ime ụlọ oriri na ọ beachụ beachụ nke agwaetiti ahụ ma ọ bụ rie ihe n'ụlọ ahịa dị n'akụkụ mmiri. Agwaetiti ahụ ga -enwe ọmarịcha ihe ụtọ nke nri creole, na -eji ihe ndị kacha ọhụrụ gụnyere nri mmiri kacha mma na mpaghara. Ị nwedịrị ike banye n'ime ụfọdụ ndị ọkụ azụ na mpaghara ahụ ka ha na -eji osisi piro ma ọ bụ buru osisi nke ọrụ ha na osisi.
Ọ bụ ezie na ọ dị obere ma dịkwa jụụ, La Digue nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya maka onye ọ bụla, na -ahapụ mmetụta na -adịgide adịgide na ịma mma ya na ile ọbịa na -ekpo ọkụ.